Xitaa lagu sameeyay qaab yar oo duullaan ah oo robot ah, hysterectomy weli waa qalliin weyn oo u baahan doona joogitaanka isbitaalka, muddada soo kabashada, iyo xaddidaadaha jireed qaarkood. Si kastaba ha noqotee, qalliinka qanjirka 'robotic hysterectomy' wuxuu caadi ahaan u oggolaanayaa bukaanada inay ku soo laabtaan shaqada oo ay dib u bilaabaan howlo kale sida ugu dhakhsaha badan bukaanada u baahan dhaq-dhaqaaqa furan ee dhaq-dhaqaaqa. Kooxda khabiirka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay fahansan yihiin muhiimada ay leedahay in la yareeyo waqtiga qalliinka kadib (markay amaan tahay oo ay haboontahay in sidaas la sameeyo) waxayna ku faantaa inay siiso robot caawinta qalitaanka ee Columbus, Dublin, iyo Westerville, OH. Akhriso si aad waxbadan uga barato Qalitaanka qanjirka 'robotic', oo ay ku jiraan cidda u baahan mid, sida ay u shaqeyso, iyo intee in leeg ayaad u baahan kartaa inaad jadwal geliso shaqada si aad u bogsato.
Ayaa u qalma qanjirka 'robotic hysterectomy'?
Qalitaanka qanjirka 'Robotic hysterectomy' wuxuu u noqon karaa ikhtiyaar ku habboon dumarka ku dhibtoodaya dhib gaar ah xaaladaha cudurada haweenka, sida:
Dhiigbax aan caadi ahayn ama daba dheeraaday
Fibroids-ka xuubka kaadi mareenka
Burooyinka aan fiicnayn
Xanuun miskaha oo joogto ah ama soo noqnoqda
Marka daaweyn badan oo muxaafid ah aysan waxtar u lahayn xaaladahaas, qalliinka 'robot hysterectomy' ayaa lagu talin karaa. Musharrixiinta qanjirka 'robotic hysterectomy' ee aagga Columbus waa inay ahaadaan kuwo guud ahaan caafimaad wanaagsan, kuwa aan sigaar cabin, oo aan lahayn wax ka hor imaan kara suuxdinta guud.
Sidee ayuu u shaqeeyaa robot-ka xubinta taranka dumarka?
Qalitaanka xubinta taranka ee Robotically caawinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo suuxdinta guud waxayna caadi ahaan qaadataa 3 - 4 saacadood si loo dhameystiro. Bukaannada sidoo kale u baahan ka saarida ugxan sidaha, makaanka afkiisa, ama qaabab kale, howshu waxay qaadan kartaa waqti dheer. Si aad u bilawdo, dhakhtarka qalliinka wuxuu sameeyaa taxane ah jeexitaanno yaryar oo caloosha hoose ah, taas oo lagu dhex gelinayo kaamiro yar iyo qalab cidhiidhi ah. Iyada oo la adeegsanayo qalabka koontoroolka fog iyo weyneynta muuqaalka, dhakhtarka qalliinka ayaa xakameyn doona qalabka si ay u sameeyaan saxarro sax ah oo sax ah oo ilmo galeenka ah. Qalliinka ka dib, bukaanku waxay filan karaan inay ku qaataan qiyaastii 2 - 4 habeen isbitaalka, taas oo ku xidhan hadba inta hawshoodu socoto iyo horumarkooda qalliinka ka dib.
Muddo intee le'eg ayaan ka joojinayaa shaqada qanjirka 'robotic hysterectomy'?
Dumarka intooda badani waxay filan karaan inay dareemaan inay diyaar u yihiin inay ku noqdaan shaqo miis ah ama shaqo fudud qiyaastii 2 - 3 toddobaad ka dib qalliinka xubinta taranka ee robotka. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim u ah bukaanada inay fahmaan in jirkoodu wali ka bogsanaayo hanaan weyn. Sababtaas awgeed, qaadista culus, jimicsiga adag, iyo galmada way ka mamnuucayaan ilaa 6 - 8 toddobaad, ama ilaa dhakhtarkaaga qalliinka uu ku siiyo oggolaansho inaad si ammaan ah dib ugu bilowdo howlahan.
Faa'iidooyinka qalliinka qanjirka 'robotic hysterectomy' iyo 'goynta furan'
Marka lagu daro in lagu soo noqon karo shaqada si dhakhso ah, robotic hysterectomy waxay bixisaa dhowr faa iidooyin ah oo ku saabsan finanka furan, oo ay ku jiraan
Dhiigbax xilliyeed oo yar
Khataraha xilliyeed iyo ka dambeeya qalliinka ka dib
Khatar yar oo infekshin ah
Habeenno kayar cisbitaalka
Muddo soo kabasho oo gaagaaban
Nabaro yar yar
Inta lagu guda jiro la-tashigaaga ugu horreeya ee qalliinka qanjirka 'robotic hysterectomy' ee Columbus, Westerville, ama aagga Dublin, bixiyeyaashayada sharafta leh waxay sifiican dib ugu eegi doonaan diiwaanadaada iyo daraasadahaaga sawirada, waxay qaadan doonaan taariikh caafimaad oo faahfaahsan, waxay ka wada hadli doonaan astaamahaaga, waxayna go'aamin doonaan inaad u-qalanto iyo in kale.
Ku laabo waxqabadyada aad ugu jeceshahay sida ugu dhakhsaha badan adoo adeegsanaya qalliin yar oo ku dhaca bartamaha Ohio
Haddii xaalad ilmo-galeen ah oo aan fiicnayn ay ka baxsato xakamaynta daweynta kale oo ay bilaabaan inay farageliyaan caafimaadkaaga iyo farxaddaada, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii la tixgelin lahaa qalliinka xubinta taranka dumarka. Qalliinka xubinta taranka ee robot ahaan lagu caawiyo, haween badan ayaa ku raaxeysan kara joogitaan cisbitaal oo kayar, waqti yar oo shaqada laga nasto, iyo xilli soo kabasho oo raaxo leh marka la barbardhigo qalitaanka xubinta taranka ee furan. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato in robot-ka iyo 'hysterectomy' ay kugu habboon tahay, call Xirfadleyda kuugu dhow goobta Caafimaadka Haweenka ee Westerville, Dublin, ama Columbus, OH maanta. Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinno inaad dareento inbadan oo naftaada ah markale qalliinka dumarka ee ugu yar.
Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville Dulmarka Haweenka Qalitaanka Qalitaanka Robotka